पद्दमा अर्याललाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा जनताले भ्रस्टचारी भन्दै लखेटे
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री पद्द्मा अर्याल लाई आज स्याङ्जामा लखेटेका छन् ।
पुस २६, २०७८ ९:२३
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री पद्द्मा अर्याल लाई आज स्याङ्जामा लखेटेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा )ओलि समुहको कार्यक्रममा पुग्न आफ्नो निर्वाचन जिल्ला स्याङ्जा पुगेकी उनी बीच बाटै फर्किएर आएकी हुन् ।
उनलाई उक्त निर्वाचन क्षेत्रका जनताले नै लखेटेका हुन् । उनी जनताले अवरोध गरेर बाटो छेकेपछी खोलाको तिरतिरै घुकिएर फर्किएकी हुन् । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केही नगर्ने र पार्टी फुटेपछी पार्टीको लागि कुनै एक समुहको बनेर आएको भन्दै लखेटेका हुन् ।
याे पनि पढ्नुस । कांग्रेस सभापतिमा शेरबहादुर देउवाको प्रतिस्पर्धी को ? महाधिवेशन ढोकामै आइपुग्दा पनि अनिश्चय उस्तै छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालाले ‘ससर्त’ दाबी छाडेका छन् ।
तर, शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंहबीच सहमति नभएसम्म पौडेल मिलनबिन्दु बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ । यसै सन्दर्भमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग गरिएको कुराकानी :
सभापतिमा देउवाको प्रतिस्पर्धामा को उठ्ने भन्नेमा तपाईंको समूहमा सहमति बनेको हो ? सहमति नै बनिसकेको त छैन । अलिकति मिल्न बाँकी छ । जिल्लाका सभापति, पूर्वसभापति, प्रदेशका सभापति र उम्मेदवारहरूको धारणा बुझौं, त्यसपछि निर्णयमा जाउँला भन्ने कुरा भएको छ ।
तपाईं आफूले उम्मेदवारको दाबी छाडिसक्नुभएको हो ? शेरबहादुर देउवाजीसँगको प्रतिस्पर्धामा जित्न सक्ने गरी विकल्पका आधारहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्, तपाईंहरू मिलेर विकल्प दिन तयार हुनुभयो भने सहयोग गर्छु भनेको छु । होइन भने द्विविधा नराखी मलाई सहयोग गर्नुहोस्, मलाई सहयोग गर्दा सबै अटाउन सकिन्छ भन्ने मेरो भनाइ छ ।
तन, मन र धनले सहयोग गर्नुभयो भने म अघि बढ्छु । नत्र तपाईंहरू मिल्नुहोस्, एक भएर आउनुहोस् । मेरो आपत्ति छैन भन्ने स्पष्ट पारेको छु । आजै बैठकले किन निर्णय गर्न सकेन त ?
सभापतिमा हाम्रोतर्फबाट एक जना मात्रै उम्मेदवार बन्नुपर्छ, नत्र हामीले सक्दैनौं भन्ने सबै साथीको भनाइ रह्यो । सुझाव दिने साथीहरूको भनाइ के थियो भने विभिन्न संघर्षको मोर्चामा नेतृत्व गरेको, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जुँधेको र वरिष्ठ पनि भएकाले पौडेलको नेतृत्वमा टिम बनाउँदा राम्रो हुन्छ ।
तर, अन्य दाबेदार साथीहरूबीच सहमति हुन्छ भन्ने म बाधक बन्दिनँ भनेर मैले भनें । पार्टीलाई जोगाउन, राजनीतिलाई सम्मानित बनाउने अभियानमा हामी छौं । तर कसको नेतृत्वमा लड्ने भन्ने टुंगो भोलिसम्म गर्ने सहमति भएको छ ।
अब धेरै कुरा प्रकाशमान सिंह र शेखरजीमा गएर अड्किएको छ । उहाँहरूबीच समझदारी भयो भने हुन्छ । समझदारी भएन भने पनि के गर्ने भन्नेबारे सबै साथीहरूको सुझाव लिएर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं ।